शेयर बजारको भित्रीकथा : ब्रोकर मालामाल, लगानीकर्ताको बेहाल « Janata Samachar
शेयर बजारको भित्रीकथा : ब्रोकर मालामाल, लगानीकर्ताको बेहाल
काठमाडौं । पछिल्लो समय सेयर बजार यसरी उचालिएको छ कि त्यसको छाल सिधै आकाश छुने बिन्दुतर्फ अघि बढेको छ । अहिले कारोबार यसरी भइरहेकाे छ कि हरेक दिन नयाँ रेकर्ड कायम बनिरहेकाे छ । जसबाट लगानीकर्ता जति खुशी भएका छन् त्यो भन्दा कयौं गुणा ज्यादा ब्रोकर अर्थात सेयर दलालहरु खुशी छन् । नहोस् पनि किन ? जसले एकै दिनमा ८ देखि १० लाखसम्म कमाइराखेका छन् । त्यो पनि एक पैसा लगानी नगरी । कुनै लगानीकर्ताले सेयर बेचे पनि आम्दानी, किने पनि आम्दानी । जसले जहाँ बसेर अनलाइनबाट कारोबार गरे पनि आफ्नो खातामा झ्याप्प पैसा आइरहने । यति भएपछि किन खुशी नहुने दलालहरु ?
बीना लगानी दिनमै लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेका सेयर दलालहरुले लगानीकर्ताबाट सेयर किन्दा र बेच्दा दुबै पटक ०.६० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेका छन् । एकै दिनमा ९ अर्बसम्मको कारोबार हुँदा उनीहरुले औसतमा ५ करोडभन्दा ज्यादा कमिसन भित्राउने गरेका छन् ।
सेयर दलालहरुको हकमा लगानी भन्दा कयौं गुणा बढी मुनाफा भइरहेको छ । जसबाट एकै दिनमा बीना लगानी लाखौं रुपैयाँ कमाइराखेका छन् । त्यसैले कमिसन घटाउन नदिन सेयर दलालले अनेक चलखेल गरिरहेका छन् ।
मंसिर १४ गते आइतबार सेयर बजार इतिहासकै सर्वाधिक उचाइ अर्थात् १९६८ दशमलब २७ बिन्दुमा पुग्यो । यस दिन कारोबार रकम पनि इतिहासकै धेरै अर्थात् ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरकोे कारोबार भयो । आइतबार २ करोड ५९ लाख ४५ हजार ३ सय ८० कित्ता सेयर कारोबार भएको छ ।
आइतबारको कारोबारमा ८८ दशमलब ५५ प्रतिशत कारोबार अनलाइनमार्फत् कारोबार भएको छ । हालसम्म अनलाइनमार्फत् कारोबार गर्नका लागि १ लाख ८९ हजारले युजरनेम र पासवर्ड लिइसकेका छन् ।
आइतबारकै कारोबारलाई हेर्ने हो भने ९ अर्ब २२ करोडको सरदर शून्य दशमलब ५० प्रतिशतका दरले ब्रोकर कमिशन छुट्याउने हो भने पनि करिब ४ करोड ६१ लाख ३६ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ ब्रोकरको कमिशनमा मात्रै गएको छ । अर्थात्, आइतबारको कारोबारबाट ५० वटा ब्रोकर कार्यालयहरुले कमिशनवापत औसतमा ९ लाख २२ हजारका दरले कमाएका छन् र त्यो उनीहरुको एकैदिनको कमाई हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा सेयरको कारोबार गर्दा अनलाइनमार्फत् आफैले कारोबार गरेपनि ब्रोकरलाई किन्दा र बेच्दा दुबैपटक कमिसनवापत रकम बुझाउनुपर्छ । बोर्डले दिएको सहमति अनुसार अहिले ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेयर किनबेच गर्दा शून्य दशमलव ६ शून्य प्रतिशत, ५० हजारभन्दा माथि ५ लाखसम्मको सेयर खरिद गर्दा शून्य दशमलव ५ शून्य प्रतिशत र ५ लाखभन्दा माथिको सेयर कारोबारमा शून्य दशमलव ४ शून्य प्रतिशत ब्रोकर कमिशन तिर्नुपर्छ ।
लगानीकर्ताले सेयर खरिद र विक्री गर्दा दुबैपटक यो रकम तिर्नुपर्छ । ब्रोकर कमिशनको रकममध्ये ८० प्रतिशत ब्रोकर र २० प्रतिशत नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई जान्छ ।
पछिल्लो १ महिनाको औसत कारोबार रकम हेर्ने हो भने दैनिक ६ अर्बको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ । दैनिक कारोबार रकमका आधारमा हेर्दा औसतमा दैनिक ३ करोड रुपैयाँ कमिसनका नाममा मात्रै ब्रोकर कार्यालयमा पुगेको छ । ३ करोडको २० प्रतिशत रकम नेप्सेलाई छुट्याउने हो भने दैनिक ६० लाख रुपैयाँ त नेप्सेलाई मात्रै गएको छ । बाँकी रहेको २ करोड ४० लाख रुपैयाँ ५० वटा ब्रोकरलाई छुट्याउने हो भने औसतमा दैनिक ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ त ब्रोकर कार्यालयले कमाइरहेकै छन् ।
प्रसँग ब्रोकरले कमाएको भन्ने होएन, नेपालमा भइरहेको कारोबार रकम र ब्रोकर कमिशनको रकम कतै चर्को पर्न गएको त होइन भन्ने हो । अहिले तीन खण्डमा विभाजन गरिएको ब्रोकर कमिशन दैनिक कारोबार रकम करिब ४० लाख हुँदा कायम गरिएको कमिशन हो ।
अहिले जब अनलाइन ट्रेडिङ शुरु भयो, ब्रोकर कार्यालयको काम आधाभन्दा बढी घटेको छ भने कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको सङ्ख्यामा पनि केही कटौती भएको छ । तर दैनिक कारोबार रकममा उछाल आउँदा जतिबेला ब्रोकर कमिशनको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो, त्यसको २२ गुणा अर्थात् २ हजार प्रतिशतले बढेको छ । तर कारोबार रकम र नाफामा हजारौं प्रतिशत परिवर्तन आउँदा पनि ब्रोकर कमिशन भने घट्न सकेको छैन ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार नेपालमा भएको ब्रोकर कशिन दक्षिण एसियामै दोस्रो महङ्गो भएको बताउँछन् ।
रौनियार ब्रोकर कमिशनको यो दर अत्याधिक महङ्गो भएको भन्दै यसलाई शून्य दशमलव २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताउँछन् । यसअघि पटकपटक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतलाई लिखित निवेदनसमेत दिई ब्रोकर कमिशन घटाउन भनिएको र बोर्डले पनि ब्रोकर कमिशन घटाउन समिति नै बनाएर प्रतिवेदन समेत आइसकेको भएपनि कमिशन नघटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्म ढुङ्गानाले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्रोकर कमिशन घटाउने भनेर सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि अझै ब्रोकर कमिशन नघटेकामा आश्चर्य लागेको रौनियारको भनाइ छ ।
कतिपय देशमा सेयर बेच्दा मात्रै कमिशन तिर्नुपर्ने र भारत लगायतका केही देशमा सेयर कारोबार गर्दा सित्तैमा पनि कारोबार गरिदिने गरेको भन्दै नेपालमा भने दोहोरो कमिशन तिर्नुपर्दा लगानीकर्ता मर्कामा परेको रौनियारको भनाइ छ ।
अहिले ५० वटा ब्रोकर कार्यालयको दैनिक आम्दानीलाई औसतमा मान्दा दैनिक करिब ५ लाखको नाफा हुने गरेको भएपनि ठूला भनिएका १० वटा ब्रोकर कार्यालयको दैनिक आम्दानी १२ लाखभन्दा बढी रहेको छ । यसरी हेर्दा शुक्रबार र शनिवारबाहेक कारोबार हुने औसतमा २० दिनलाई आधार मान्दा यी ठूला ब्रोकर कार्यालयले मासिक करिब २ करोड ४० लाखका दरले कामाउँछन् । जबकि यस्ता ब्रोकर कम्पनीहरुको पूँजी नै २ करोडदेखि १० करोडसम्म मात्रै रहने गरेको छ । खर्च र आम्दानी अनुपात हेर्दा नेपाल सरकारले ब्यापारमा दिएको २० प्रतिशतको नाफा सेयर कारोबारका क्रममा ब्रोकरको भने २ सय प्रतिशत भन्दा बढी रहने गरेको छ ।